Lanto Rakotomanga: Miaraka amintsika ny fandresena
mercredi, 15 mai 2019 10:55
Tsiadana, Ampasanimalo, Ambohidepona indray ny nitsidihan'ny kandida laharana 01, Lanto Rakotomanga sy Jaojoby Eusèbe, izay lisitra natolotry ny antoko politika, Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina, ato amin'ny Boriborintany faha II, niaraka tamin'ireo mpiaradia aminy.
Nijery ny zava-misy tety an-toerana izy ireo. Tsikaritra fa maro tokoa ireo fotodrafitrasa tokony hamboarina sy harenina, ary vitantsika io hoy izy rehefa miray hina sy mifanome tanana isika miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina.
Tsy tonga antanampolo anefa izy fa dia nizaha ireo be antitra, ary nanome bodofotsy hoan'ireto farany amin'izao andro ririnina izao. Teo ihany koa ny fijerevana ireo tanora tamin'ny fanomezana baolina boribory sy baolina lavalava ho azy ireo.
Misy toerana manokana izay mampiavaka ity faritry ny Boriborintany faha II ity, dia ny fisian'ny kianja filalaovana kanety be, ary maro ireo mpilalao sangany, ary efa nandray anjara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, izay teo no nipoirany. Koa hoy i Lanto Rakotomanga, tsy maintsy hatao manarapenitra ity kianja ity mba hampiroboroboina bebe kokoa izany taranja tsipy kanety be izany.
Toy ny fanaony koa, dia tsy hadinony ireo mpanasa lamba, koa notolorany koveta sy bidon ho an'ireo mpantsaka rano.